Tun Tun's Photo Diary: November 2015
at 11/30/2015 11:52:00 PM Links to this post5comments:
at 11/27/2015 09:06:00 PM Links to this post No comments:
18-Aug-2012, Penang မြို.မှာ ဒုတိယမြောက်နေ.ပါ။ တခြားနေရာတွေ မသွားခင် ဟိုတယ်နားက Tourist attraction တွေကိုအရင်သွားပါမယ်။ Hotel က Little India မှာဆိုတော့ အချက်အချာကျတယ်လို. ပြောလို.ရတယ်။ အရင်ဆုံး ဟိုတယ်ကနေ တခါတည်း Check out လုပ်ပြီး Luggage တွေကို reception မှာ ထားခဲ့လိုက်တယ်။ ဟိုတယ် က Budge hotel ဆိုတော့ Luggage တလုံးကို 10 RM ဆိုလား ထိန်းသိမ်းခ ပေးရပါတယ်။ ဒီနေ.ည ၁၀နာရီ ဘတ်စ်ကားနဲ. စင်ကာပူကိုပြန်မှာလေ။
at 11/26/2015 07:32:00 PM Links to this post No comments:
My Monthly Expense as of 2015
ဒီရက်ပိုင်းသူများ fb မှာ တွက်ပြထားတာ ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို. တွက်ကြည့်တာ။
Accomodation - HDB မှာ အခန်းဖော်နဲ. နေရင်၊ အဲ့ယားကွန်းကော အပြီးအစီးဆို ရင် $450 ဆိုရင်ရပါတယ်။
Utilities - ရေဖိုး မီးဖိုး ကတော့ အိမ်ငှားဆိုတော့ အိမ်လခထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။
Food - မနက်စာက နွားနို. (သို.) ကော်ဖီပဲသောက်တယ်၊ နေ.လည်စာက $5၊ ညစာက $5 (တခါတလေ အိမ်မှာချက်စား)၊ တပတ်ကို ၁ ခါလောက် စားသောက်ဆိုင်ထိုင် ဖြစ်တယ်။ $400 လောက်တော့ ကုန်တယ်။
Public Transport - Taxi မစီးပဲ Train/bus ပဲစီးတော့ EZ link ကဒ်မှာ $100 top-up လုပ်ထားရင် တလ စာ စီးဖို. လုံလောက်ပါတယ်။ တခါတလေ အပြင်ထွက်တာ များရင် $120 လောက် တော့ ကုန်တယ်။
Telecomunication - Starhub က အနိမ့်ဆုံး 4G Plan ယူထားတာ တစ်လကို $40 လောက်ပေးရပါတယ်။ ဖုန်းပြောတဲ့ မိနစ်အများကြီး မလိုဘူးလေ။ အခုခေတ်က Viber, Whatapp, FB messenger ပဲသုံးစ်ြတာ များတယ်။
Hair Cut - $12 တန် ဆိုင်မှာ ညှပ်တစ်လ တစ်ခါ ညှပ်တယ်။ ပန်နီဆူလာဆိုင်မှာ $5 ကျပ်တန်ဆိုင်တွေ လဲ ရှိပါတယ်။
Personal Expense - Snacks, Soap, Shampoo, Hair Cream etc က တလ ကို $50 ပဲထက်ပိုမကုန်ပါဘူး။
Shopping - ပုံမှန် မရှိဘူး။ တနှစ်မှ ၃ ခါလောက် ပဲ Sale ရှိမှ လုပ်ဖြစ်တယ်။
Hobby and Holiday - တစ်လ ကို ၌ $100 လောက်စုပြီး တနှစ်ကို ၂ခါလောက်တော့ (အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ) ခရီးထွက်တယ်။ မြန်မာ ပြန်တာ မပါ။
Accommodation - $450
Public Tranport - $100
Telecommunication - $40
Hair Cut - $12
Personal Expense - $50
Hobby and Holiday - $100
Total - $1,202
သင်ရော စင်ကာပူမှာနေတာ တစ်လ ဘယ်လောက်ကုန်သလဲ?
at 11/24/2015 08:44:00 PM Links to this post No comments:
at 11/13/2015 10:59:00 PM Links to this post 1 comment: